ရဲတပ်ဖွဲ့! iPhone X ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ရဲတပ်ဖွဲ့! iPhone X မျက်နှာပြင်ကိုမကြည့်ပါနှင့်
၎င်းသည်ဟာသတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်မှာ၎င်းသည် iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max သို့မဟုတ် iPhone XR (ရောင်းချသည့်အခါ) ၏မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်ပြaနာတစ်ခု Face ID အာရုံခံကိရိယာဖြင့်ဤဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုတွင်သံသယရှိခံရသောအခါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုပုံရိပ်ကိုသတိရ Craig Federighi သည်အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ရစဉ် 2017 ခုနှစ်တွင်တင်ပြခဲ့သော iPhone X သည်ချက်ချင်းသော့ဖွင့်ခြင်းမခံရသောအခါနှင့်အမှားသည်အာရုံခံကိရိယာ၏ပျက်ကွက်မှုမဟုတ်သော်လည်းယခင်က Face ID သည်အခြားမျက်နှာများကိုသော့ဖွင့်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဆိုးကျိုးများစွာပြီးနောက် (မျက်နှာတစ်မျိုးတည်းသာမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ) iPhone X ကိုပိတ်ထားပြီးဂဏန်းကုဒ်ကိုသာတုန့်ပြန်သည်။
PARIS, ပြင်သစ် - နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် - သုံးစွဲသူတစ် ဦး သည်အက်ပဲအိုင်ဖုန်းအက်စ်အက် (စ်) တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်၏အက်ပလီကေးရှင်းသစ်ကိုမျက်နှာဖုံးအခတ်ခံယူသည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကို ၂၀၁၇၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်၊ အက်ပဲလ်၏နောက်ဆုံးပေါ် iPhone X မျက်နှာပြင်သည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနည်းပညာ၊ ကြီးမားသော ၅.၈ လက်မအရွယ်အစွန်းအဆုံးမှအမြင့်ဆုံး resolution OLED မျက်နှာပြင်နှင့် optical image stabilization ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာများပါ ၀ င်သည်။ (Chesnot / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ပုံသေကုဒ်သည်ဂဏန်း ၆ လုံးပါ၊ ၎င်းမှာနောက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်
သို့ဖြစ်ရာ iPhone X သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောသံသယရှိသူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်အာဏာပိုင်များသည်စမတ်ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်မကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့နောက်ထိန်းသိမ်းထားသူကိုစွပ်စွဲရန်သုံးသောအချက်အလက်များကိုရယူရန် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရဲများမည်သို့မြင်သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် သံသယရှိသူရဲ့ iPhone X ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ Face ID ကိုသုံးတယ် ၎င်းသည် "လုံးဝတရား ၀ င်မှုမရှိ" သော်လည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ အေးဂျင့်သို့မဟုတ်အေးဂျင့်များသည် iPhone ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါကကုဒ်နှင့်သော့ခတ်ထားလိမ့်မည်။
အတွင်းပိုင်းကြေငြာချက်တွင်ရဲတွင် iPhone တွင် Face ID အာရုံခံကိရိယာပါရှိလျှင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုညွှန်ကြားထားသည်။ ၎င်းသည်ရယ်စရာကောင်းပုံရသော်လည်းဤလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုဥပဒေကပြregul္ဌာန်းခြင်းမပြုလုပ်မှီအာဏာပိုင်များသည်စက်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူရန်ဤတရားဝင်လေဟာနယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကပိတ်ဆို့ကြဘူးပြီးတော့ကုဒ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်အဖြစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone အတွက် X ကို » ရဲတပ်ဖွဲ့! iPhone X မျက်နှာပြင်ကိုမကြည့်ပါနှင့်
Jordi Giménez, ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်မကောင်းသောအရာမဟုတ်သောနည်းပညာအကြောင်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရေးပါ၊ သို့သော်တကယ်တော့သူငယ်ချင်း။ သင်ဟာတရားရေးကိစ္စတွေမှာရှုံးနိမ့်ပြီးနည်းနည်းလေးမှမဟုတ်တော့ပါ ...
စကားမစပ် ... ဒီ "လုပ်ငန်းလည်ပတ်" လယ်ပြင်၌တရားဝင်သို့မဟုတ်မဘာကိုရှင်းပြဖို့အကြှနျုပျအဘို့အဆင်မပြေသည်။
Adobe က iPad အတွက် Photoshop CC နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
အက်ပဲလ်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ iPhone ပုံစံမျိုးကိုလိုက်နာမှာပါ